Ajaaniibtii ugu badneyd Al-Shabaab oo baxsad ka ah deeganada.. - Hablaha Media Network
Ajaaniibtii ugu badneyd Al-Shabaab oo baxsad ka ah deeganada..
HMN:- Wararka inaga soo gaaraya Deegaano ka tirsan Gobolka Shabellaha Hoose ayaa waxaa ay sheegayaan in Ajaaniibti ugu badneyd ee Al-Shabaab ka barbardagaalameysay ay isugu tageen deegaano ka tirsan Gobolkaas.
Ajaaniibta Al-Shabaab la safan ayaa la xaqiijiyay in ay gaareen Deegaank aJilib marka iyo Deegano kale oo ka tirsan Degmada Awdheegle oo isla Gobolka Shabellaha Hoose ah.
Waxaana goobaha ay gaareen ay ka wadaan Dhaqdhaqaaqyo Ciidan lamana oga in ay Al-Shabaab isaga bixi doonaan deegaanadaas iyo in ay ku nagaan doonaan.
Waxaaana guud ahaan Deegaanada Al-Shabaab iyo Ciidamada Dowlada ay kaga sugan yihiin Gobolka Shabellaha Hoose,waxaana dhaqdhaqaaqyada Al-Shabaab ay ku soo beegmayaan xili maalin ka hor ciidamada Mareykanka weerar ka fuliyeen Shabellaha Hoose.
Waxaana ay arrintan Muujineysaa in ay qax ka yihiin Deegaanada Gobolka Shabellaha hoose kadib markii Askari mareykan ah ay ku dileen Deegaanka Daarusalaam oo ka tirsan Awdheegle.